धार्मिक Archives - Page 16 of 16 - Eall Nepal
अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ ...
शनिवार आउछ जान्छ तर मानबिय दृष्ट्रीकोणमा शनिवारका दिन यी कुरा किनमेल गर्दा तेती सुहाउदैन या अशुभ मानिन्छ … धार्मिक तवरले हेर्ने हो भने, शनिवारको दिनलाई श्रीरामभक्त-पवनपुत्र हनुमानजीको पूजा र शनिदेवको आरधना गर्नको लागि सबैभन्दा सुभ ...
यी राशिहरुबीच प्रेम र विवाह गर्नु आत्महत्या गर्नु समान प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । यसै आधारमा केही राशि जो एक–अर्काको शत्रु मानिएको छ, त्यस्तै केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै लगाव रहने ...
धर्मशास्त्र भन्छ नुहाउने बेला यी काम गरे खुल्नेछ तपाईको भाग्य ! दिनको सबै महत्वपूर्ण कार्यका लागि धर्मशास्त्रमा विभिन्न मन्त्रहरु उल्लेख गरीएका छन्। नुहाउने समयमा पनि मन्त्र जप गर्नु पर्छ। नुहाउने बेलामा जप, भजन वा भगवानको ...
थाहा पाउनुहोस् तपाईको भाग्यरेखा यि महिना जन्मीने मानिस अर्वपति हुनेछन …
यी महिना मा जन्मिने व्यक्ति अर्बपति हुनेछन ? जानकारी लिनुहोस.. तपाइको भाग्यपरिक्ष्या ग्रह, नक्षत्र, बार, तिथिहरुको आधारमा मानिसहरुको भविष्यको फल बनाइन्छ । यसमा महिनाको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । १. बैशाख महिनाः बैशाख ...
घरमा धनको अभाव हुन नदिन यो दिसामा मनि पलान्ट राखनुहोस्…
घरको बास्तु दोष भगाउनको लागि हाम्रो धर्म शास्त्रहरुमा अनेकौ उपायहरु बताइएका छन्। बस्तु शास्त्रका अनुसार अनेक किसिमका रुख बिरुवा लगाउदा घर को नकारारात्मक उर्जा हटाउन मा मद्धत मिल्दछ। बास्तु शास्त्र मा बोट बिरुवा लगाउने एउटा ...